Kamorning glory: Mazvamburiro andakaita babe rangu nemboro | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Kamorning glory: Mazvamburiro andakaita babe rangu nemboro
Kamorning glory: Mazvamburiro andakaita babe rangu nemboro
Ndakati ndichimuka makuseni ndokubva ndapinda hangu mubathroom kuti ndigeze ko yainge yava summer 5:15 am kunze kwainge kwatochena. Chandaiwona mubedroom mangu aingova mapants pasi zvese zvainge zvaitika husiku zvainge zvichiri mumusoro.
Haaa beche rinonaka mhani kana uchinge wagona kupakururwa unogara uchikwira everyday. Babe rangu ndairida and as much as I know kana iye aindidawo, pandikawona kapant kake keblack pasi ndakabva ndaziva kuti haana kana bhurugwa, ndakafugura blanket ndokuwona position yainge akarara nayo beche rese raiwoneka. Ndakatanga kunzwa mboro yangu ichimuka zvishoma nezvishoma ndokubva ndaita kuzevezera ndichiti babe babe… wakamuka here akandipindura arikuhope but paakanzwa kuti ndainge ndichimupuruzira akabva atangawo kuita action.
Pasina chinguva ndakanzwa munhu akungoti iiiii ummm iiii ummhhh babe kani usadaro ndokubva ndati ndimire here babe, zvikanziii aaaaiihwa usamire. Ndakaramba ndichiyenderera mbere apa zemo rainge richibata mboro yangu yachimira zvino apa beche racho rainge raita kutota kuita kunge munhu atova nema weeks asati abatwa nemurume, waiti uchimubata beche so waingonzwa zvese zvichitsvedzerera pakati pemakumbo.
Ndakada kuisa musoro wemboro ndikanzwa munhu achishinyira uuummmhhh babe usamire kani, ndakambomunyemudza kwekanguva kusvika munhu ayita kuiti dzviii ndokudhonza mboro achiinangisa pabeche rake achibva andisunga pamusana nemakumbo, ko ndaizivei kuti pakutamba tamba kwatainge taita munhu ayitonge akutotunda kekutanga. Akaita kunditibata achindidhonzera mukati kuti mboro inyure yese, ndainzwa mboro yangu ichiita kakusungwa ichibatwa nemhasuru dzebeche apa munhu achitunda.
Akati apedza kutunda akaita kamwe kakuchemerera kakabva kandipa manyemwe, ndakasimudza gumbo one ndokubva ndariisa pashoulder rangu ndakatarisa beche ndichiwona mboro yangu ichipinda mubeche rainge rafuta zvino. Mwana anonaka mhani iye and chikapa chaanenge achiita ipapo unopa kutenda mhani, ndainyatsonzwa kunakirwa zvaisvika kungotsi chaiko. Ndakatanga kuita zvekuzvambura beche apa ndainzwa huronyo huchiita kuwungana ndichiita kunge munhu achaputika, ndakaramba ndichikoira ndikanzwa babe rangu rakundidhonza zvakare ndikaziva kuti zvakuitika futi, akabva atunda zvakare.
Panguva iyoyo zvainge zvasarira inini but ndaitonzwa kuti hapana kana nguva ndakangoti koi koi ndinzwe speed yawedzera apa babe rainge rakaita 180 chaiyo ndiye tsaaa tsaaa tsaaa kutundira mukati chaimo. Ndakamboramba ndakararira ndichipa mukana wekuti huronyo hwese hupinde mubeche rebabe rangu, haaa kusvirana kwemakuseni kunakidza kana zuva rako rinoswera rakanaka uchingofunga kudzokera kumba.
Previous articleNdiri kuchata muna December but ndirikutya kusvirwa
Next articleSusan akanditi anongonakirwa nemboro yangu chete